Short Story:Ndakabatwa chibharo namaiguru, but ndakazovapedzera! – Vanoda Zvinhu
· Updated August 29, 2015
Hana yakati bha , Pandakatii baa food yandainge ndaseterwa.
Nechemumwoyo ndakangoti, aya Ndoo mashura. Kukasafiwa ,ndini ndinofa nemuchetura. Hazvaisashamisa nekuti nguva dzose mukoma vasipo maiguru vaindipakurira ka Spede, kana kutoshaya zvachose. Maiguru vanga vakandimaka zvekuti dhemet, vakatombosvika pakuda kundidzosa kumusha vachiti hee haateerere ,aneusimbe haadi kutsvaka basa. Zvemusi uyu ndakangoti hamheno.
Ndakaigarira rice nechiken zvanga zviri so appetizing, neka salad padivi. Ka coke kari pa side.Ndapedza kudya ndakageza ndookuchinja semunhu aida kupinda mutown. Ndavakutobuda ndakanzwa , “nhai bamnini ko zvamunenge mavekutobuda? Siyai mandigadzirirawo bulb rangu ini ndichinogeza, mungazononoka kudzoka.”
Ndakabva ndaenda ku bedroom kwavo ndikatrya kubakisa light zveshuwa harina kubaka.Ndakakwira pastool yaivamo ndookubvisa bulb.
Hapana kupera kana 2 minutes munhu achigeza ndakanzwa door bheu, ndikati “ah maiguru handisi kuona problem, bulb harina kutsva .Maybe zvaakutoda electrician atarise wiring yacho.”
Ivo ndookuti,”zviri kwaaniko bamnini? Harina kutsva ndini zvangu ndadhingura magetsi.” Pandakati cheu ndakaona maiguru vakamonera towel kubvira nechapamazamu but mazamu anga ari almost pachena.Hana yakati bha ndookusvetuka pa stool Pandaiva ndakakwira ndikati,” zvino mandishevedzerei nhai maiguru pasina problem?” Vakabva vauya close neni ndookuti ,” ndanga ndichida kuti mumbogarawo mukoma wenyu nhaka zvanhasi chete. I’m so lonely since aenda kuBulawayo. Ndoita nzara imi vadyi venhaka muripo? ” Hana yangu yakatanga kubika manhanga. Ndakatanga kurova reverse ndakananga ku door. Maiguru vakakwakuka vachibva vakiya door . “Is this a trap or…? what’s the meaning of all this maiguru ? Handidi zvangu mastaera maiguru ndivhurireiwo door please.” Ndakadaro ndobvunda zvino.
“Stupid wakaita seiko iwe mu SRB, unenge une shavi asi wakaremara. Oo makeys acho vhura uyende kana wazvipira.” Ndakatambira makeys ndokubata door. Maiguru ndookuti ,”bamnini dai makangwara marova chinhu ichi, remember we are only two muno no witnesses if you walk out it means you have raped me. No 1 will believe you.” Simba rakabva rapera,makeys aya ndiye kwatara pasi. Vakauya ndookundibata nechemuchiuno. Ndookundipushira pamubhedha, apa ndagumirwa zvino.nekuchimbidza vakasvetukira pamakumbo angu vakapfugamira vakaita zvekunditanangira. Sezvo ndanga ndakaita zvekugara vakandisandudzira zvinyoro nyoro kuti ndirare nemaji. Pakarepo vakabva vatanga kundibvisa ma buttons eshirt. Vanhuwe hana yakaita seichabuda muchipfuva .
Kutaura chokwadi maiguru yaiva mbambande chaiyo nyangwe zvavo vainge vave nevana vaviri. Asi nekubatana kwese uku mboro yangu haina kumira, ndaingofunga kuti maiguru vaida kundi trepa ,nekuti vainge vakandimaka zveshuwa.
“Musaone kuita sendinokumakai bamnini, kurwadziwa kwandinenge ndichiita mufunge ,kuti munhu asina kana action uyu ndomudii.Apa munongondinyemudza naicho chiwepu chamakatakura ichi. Munoti handione here,musadaro murehwa. Kasi ndakashata?” Apa vainge vatondibvisa bande,bhurugwa ne brief zvave kuchitsitsinho.
Vakatanga kuitambisa vachiirovera paguvhu pangu. Apa nekutya kuya haingamire. Vakaitora ndiye mukanwa ndo. Vakaiyamwa apa mabhora vachitambisa. Yakazongotsamwa ndiye twi.vakati nekanzwi katete tete, “zvamakatakura mukwende nhai murehwa kana mukoma venyu havakwani.” Havana kumira semunhu anga aine havi ye mwedzi wose vakabva vandigarira ndiye muneravo pfe. “Oh ! Maiwee kani , yuhwi kani”. Vakatanga kuchemerera ichangopinda. Vakatanga kubhamba vari pa Girl on top position. vakaita mutonono.
Vakakoira kwe dzingangosvika 5 minutes vachikurunga vari pa crouching position. Semunhu anga ave nenguva asati asvirwa ,ndakaona munhu achipirirwa ega,apa muwiri waomeswa kuti nga. Wakachinja position ndokuti zvambarara pamusoro pangu ndiye muromo wavo ndi pane wangu vakatanga kusvisvina lower lip rangu apa vachitsvaga rurimi . pose apa ndainge ndisiri kana mu mood yekusvira hana yangu yaingoti pangu papera. But ne kiss iyi ndakanzwa stimulation.Ropa rangu rikatanga kumhanya. Ndakavapa rurimi vakarusvisvina apa mai vachikoira sevaka connectwa kumagetsi.Nguva isipi ndakanzwa kamhere tetsu munhu otunda.
Apa vainge vadenha zvirere, zikiss ravakandipa rakanga riri international, zvekuti ndiri kurepwa zvose hwa, mboro yangu yakabva yaita simbi chaiyo. Ivo vachitunda ini ndichitanga kuti 1. Ndakavapindurudza ndookuvaisa pa doggie position, varume uku ndookunonzi kuponda nhamo. Ndakabva ndati zimboro rangu pfe. Ndikati ndotsemura chunhu. Ndakarova ma deep strokes very fast ndichirova ku dead end maybe close to the cervix. Ndikanzwa mai yoyuwira, ” zvakwana murehwa, makatakura makwiramiti. Zvaita kani Baba.” Ndikati handidzore tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Ndakaita 10 good minutes ndichiponda chinhu mai vachichema. Ndakazodzikisa speed zvishoma ndikatanga kukurungira zvishoma ne zvishoma ndichitsvaga second orgasm ndakazoona misodzi yebeche chirururu,neniwo ipapo ndiye tsaa tsaa tsaa .
Next story Lesson 1 pakuSvira
Previous story Ndakazokwira bby randakaona paFacebook rinogara kutembisa